PMO ၏ဆွဲဆောင်မှု - ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်း - အချစ်၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းဘလော့ PMO ၏ဆွဲဆောင်မှု
adminaccount888 1st ဇန်နဝါရီလ 2022 နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ဤဘလော့ဂ်သည် အသက် 30 အစောပိုင်းက အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။porn-masturbation-orgasm (PMO) နှင့် ၎င်း၏ ပါဝါကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ။
PMO 'စိတ်ထား' လို့ထင်တဲ့ အရာတစ်ခု ရှိတယ် - မူးရူးပြီး မူးရူးနေချိန် PMO ဟာ နေနဲ့တူပါတယ် - သင့်ဘဝရဲ့ ကြီးမားပုံပေါ်ပါတယ်။ သို့သော် ထိုအခြေအနေမှ လွတ်မြောက်သောအခါ သင်သည် ၎င်းမှ ဆုတ်ခွာသွားကာ အဝေးမှ ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်လာသည်။ သူ့မှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအားတွေ နည်းပါးပေမယ့် မင်းရဲ့ အဖြစ်မှန်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျန်နေပါသေးတယ်။ အထောက်အကူမပြုသော အတွေးများက သင့်အား ၎င်းထံသို့ ပြန်ပို့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ porn အသုံးပြုသူအများစုသည် သိက္ခာရှိမှုနှင့် အသုံးပြုခြင်းကြားတွင် ဤအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ခရီးကို တွေ့ကြုံခံစားဖူးကြသောကြောင့် PMO ကိုင်ဆောင်ထားမှု အားနည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် ယာယီမရှိသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ရရှိရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်။
PMO သို့ပြန်သွားခြင်းကို ဖမ်းဆီးရာတွင် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ 'ရည်ရွယ်ချက်' ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးလို့ ထင်ရပေမယ့် သည်းခံပါ။
မင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စစ်မှန်ရမယ် လို့ ပြောရင် ပိုထင်သာထင်သာ ရှိပေလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘူး။ စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အဘိဓာန်နားလည်ခြင်းနှင့် အတွေ့အကြုံအရ ၎င်းတို့ဆိုလိုသည်ကို နားလည်ခြင်းကြား ခြားနားချက်တစ်ခုရှိသည်။ စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်သည် ၎င်းကိုဖြစ်စေရန် သုံးသောစကားလုံးများထက် မပိုပါ။ စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်သည် သင့်အား လုံခြုံသောလုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ချမှတ်ပေးသည့် အတွင်းစိတ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကားလုံးတွေထက် ပိုပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြုံဖူးကြပါတယ်- တစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲလိုတဲ့ သို့မဟုတ် ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရောက်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆန္ဒက အောင်မြင်တဲ့အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သော့ချက်က ငါတို့ ကျရှုံးတဲ့အခါ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်တက်ဖို့ သေချာတဲ့ မီးလမ်းရှိလို့ အဲဒါကို တီထွင်နိုင်ကြဖို့ပါ။
စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်ကို မည်သို့ဖန်တီးသနည်း။ ကောင်းပြီ မင်းဒီမှာရှိခြင်းအားဖြင့် ပထမခြေလှမ်းကို ပြီးသွားပြီ။ ကြီးမြတ်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ အချစ်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့် မင်းဒီစာကိုဖတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ Gary Wilson's ၏မိတ္တူကိုဝယ်ပါ။ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်. အလျင်စလို မလုပ်ပါနှင့်။ သင်ဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ်လို ဂရုတစိုက်ပြန်ဖတ်ပြီး သင့်အခြေအနေအပေါ် ဘယ်လိုထင်ဟပ်စေသလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်များသည် သင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် နှစ်သက်သောအရာများကို တွေးတောစေမည်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ကို ဖြည့်စွက်ပေးမည့် လူတစ်ဦးစီအတွက် စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖန်တီးရန် အခြားနည်းလမ်းများ ရှိပါမည်။ ဒါတွေကို စဉ်းစားပြီး အရေးကြီးဆုံးက ချရေးပါ။ ဘောပင်နှင့် စက္ကူ သို့မဟုတ် အက်ပ်/ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက နာမည်ကြီး Zettelkasten မှတ်သားခြင်းအစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုကို အကြံပြုလိုပါသည်။ Obsidian.
ဤပရိုဂရမ်များသည် သင့်အား အပြန်အလှန်ကိုးကားနိုင်သော ကျယ်ပြန့်သောမှတ်စုများကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေပါသည်။ ကိုယ့်အကြောင်း သိမြင်လာတဲ့အခါ မှတ်သားထားပါ။ ရက်သတ္တပတ်နှင့်လများကုန်ဆုံးလာသည်နှင့်အမျှ သင်မှတ်စုများမရေးပါက၊ သင့်အသိဥာဏ်များစွာကို မေ့သွားကာ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် စာရွက်ပေါ်တွင် ဘောပင်ချပြီးသည်နှင့် အပြည့်အစုံဖွဲ့စည်းထားသော စာစီစာကုံးများကို မရေးကြသကဲ့သို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကွဲလွဲကွဲပြားသော အတွေးများကို မကျူးလွန်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများလည်း မဖြစ်ထွန်းနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့ကို စည်းလုံးညီညွှတ်စေပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ထိုးထွင်းအမြင်များအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်သေသောအခါအဆုံးသတ်သည့် ယနေ့စထရိကိုစတင်ရန်မဟုတ်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသောနေ့တွင် PMO ကိုရှောင်ရှားရန်၊ တိုက်တွန်းချက်များနှင့်ကြိုးစားဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ဘားကို မြင့်မားလွန်းပြီး ဂျစ်ကန်ကန်ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပျက်ကွက်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် PMO တွင် ပါဝင်ရန် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထင်မြင်လာစေသည်။ သင့်ရည်မှန်းချက်တွင် နှိမ့်ချမှုပိုရှိခြင်းက ပိုကောင်းသည် ရလဒ်မှာ သင့်ကိုယ်သင်ပို၍ဖိအားမပေးသောကြောင့် ပိုကြီးသောအောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုဖန်တီးနိုင်လျှင် PMO မှသင်၏ခရီးကိုစတင်ရန်အင်ဂျင်အမျိုးအစားတစ်ခုရှိသည်။ မအောင်မြင်ရင်တောင်မှ ပြန်စနိုင်ပါတယ်။ ဒါက မင်း တစ်ချက်တည်းနဲ့ ရိုက်နိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏မိတ္တူကိုမျှော်လင့်ပါ။ YBOP အပြေးသမားရဲ့ ဖိနပ်တွေ စုတ်ပြတ်သွားသလို ခွေးနားရွက်ဖြစ်လာဖို့၊ စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းကို သင်တွေ့ရှိပြီးသည်နှင့် သင့်ပြက္ခဒိန်ရှိ PMO ၏ကျယ်ပြန့်သောကာလများကြားတွင် ဓားတစ်ချောင်းရရှိပြီး ကွာဟချက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
ဆက်တိုက်ကျရှုံးရင် အပြေးသမားအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်ပါတယ်။ စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ကို ဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်လျှင် PMO ၏ဥပမာများကြားတွင် သုံးရက်ခန့်မတင်မီ နှစ်ပတ်အတွင်း သင်ယခု နှစ်ပတ်ထားနိုင်သည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ အဲဒါက နောက်ဆုံးမှာ သုံးပတ်နဲ့ သုံးလေးခု ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီကွာဟချက်တွေက မင်းကို ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ မနေဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် တစ်နှစ်အတွင်း အချိန်အများကြီးပေးလိမ့်မယ်။ PMO မှ
ရည်ရွယ်ချက်တွေ အများကြီးရှိပေမယ့် တွန်းအားပေးမှုတွေနဲ့ တွဲနေတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အတွေးတွေကော ဘယ်လိုလဲ။ ဒါတွေက ငါတို့ကို ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်ဆံရန် ပရိုတိုကောတစ်ခု ရှိသင့်သည်။ ဥပမာ- အလိုဆန္ဒလှိုင်းကို တွေ့ကြုံရပါက ရူပဗေဒဘာသာရပ်အနေဖြင့် ၎င်းကို မတည်တံ့နိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ အဲဒါကို နောင်တရမယ့်အစား၊ သူ့မှာ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ သက်တမ်းရှိတယ်လို့ သိထားပါ၊ အဲဒါကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင် သေသွားမှာပဲ၊ ပြီးတော့ မင်းခံစားရသမျှဟာ နောင်တရလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒတွေ အထွတ်အထိပ် ကျဆင်းသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကြုံဖူးကြပေမယ့် ပြန်လည် ဆုတ်ခွာပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော် မလိုလားအပ်သော အတွေးများ ပေါ်လာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ တွေးခေါ်တတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သဘာဝကာလထက် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကို တိုးစေသည်။ သင့်စိတ်ထဲတွင် သူတို့၏အသွင်အပြင်ကို သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို ပြေပျောက်စေရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူတို့ကို ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အဆက်မပြတ် ခွင့်ပြုထားရင် သူတို့ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်း သူတို့ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သဘောကျရင် သူတို့ ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့သည် သင့်လူ၏အမြဲတမ်းအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်ပြန်ဝင်လာတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့အား ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့ထင်မြင်လာသောကြောင့် မထင်လိုက်ပါနှင့်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို တကယ်ပြန်ဖြစ်လာစေတယ်။ ၎င်းတို့ကို သတိပြုမိလာသည်နှင့်အမျှ PMO တွင် ပါဝင်လိုသည့် ဆန္ဒများကို စတင်တွေ့ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ အားနည်းနေတဲ့အခါ သူတို့ကို သင်ဘယ်လို ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်ပါ- သူတို့ဟာ အားကောင်းသလောက် အလွယ်တကူ အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို နှိပ်စက်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ရအောင်ယူပါ။
ကြည့်လိုက်ပါဦး Reddit နှင့် တခြားနေရာ နည်းစနစ်များအတွက် နှင့် သင့်အခြေအနေနှင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကြိုးစားပါ။ ညစ်ညမ်းခြင်းကို ဖြတ်ရန် အရင်းအမြစ်များစွာလည်း ရှိပါသည်။ အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါ လုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုက စိတ်ထဲရှိတာကို စွန့်စားတာ၊ အထွတ်အထိပ်ရောက်တာ၊ အေးမြတာ၊ နောင်တရတာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရွံရှာတာ၊ အနာဂတ်မှာ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာ တွန်းအားပေးမှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လှဲလျောင်းပြီး သီချင်းနားထောင်ပါ သို့မဟုတ် အသက်ပြင်းပြင်းရှူကြည့်ပါ။ ရပ်တန့်နာရီကိုတောင် မစတင်ဘဲ လှိုင်း၏ကြာချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်မထားပါ။ သင့်တွင် အချက်အလက်အချို့ရရှိပြီးသည်နှင့် သင်မည်မျှကြာကြာ သိမ်းပိုက်ထားရမည်ဟု စိတ်ကူးရပါလိမ့်မည်။ သင် မည်မျှ ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ကို သိနိုင်စေရန် ဤဖြစ်ရပ်များကိုပင် စာရင်းပြုစုနိုင်ပါသည်။ မင်းမှာ သုံးပွဲနိုင်ရင် စတုတ္ထအကြိမ် ပေးရတာ ပိုခက်တယ်။
ပြဿနာတိုင်းကို သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောလူများက ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ဆို့သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် လုံလောက်သည်ဟု ထင်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် PMO တွင် သင့်အား ပါဝင်ပတ်သက်ရန် ဦးတည်စေသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လက်ချောင်းထိပ်တွင် ရိုးရှင်းစွာ ပိတ်ဆို့ထား၍မရပါ (ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းလမ်းများကို ရှာတွေ့ထားပါသည်)။ ဆော့ဝဲလ်မှာ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ၎င်း၏အသုံးဝင်မှုမှာ PMO နှင့်ပတ်သက်သော အတွေးအမြင်များဆီသို့ ဦးတည်စေသော သင်၏ virtual ရှုခင်းမှ သွေးဆောင်မှုများကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Streak ကောင်တာများသည်လည်း အသုံးဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် အဆုံးမရှိသင့်ပေ။ အွန်လိုင်းမှာ စတော့ရှယ်ယာတွေ အများကြီးထည့်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး ပျက်ကွက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ကျရှုံးမှုဟာ အပြီးအပိုင်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လိုင်စင်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ရက် 20 ရှောင်ပြီး ပျက်ကွက်ရင် ရက် 20 ရှောင်နေသေးတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့် PMO ၏ဥပမာများနှင့် သင်၏တိုက်ရိုက်ရက်များ၏အချိုးအစားကို ပိုကောင်းသည်ဟု အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှ အကြံပြုခဲ့သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ၎င်းကိုပယ်ဖျက်မည့်အစား streak တစ်ခု၏တန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း PMO ၏လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းတွင် အချိုးအစားလျော့နည်းသွားသောကြောင့် ဂိမ်းယန္တရားကို ဟန့်တားထားသည်။ သင့်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြတ်တောက်ရန် အားပေးသည်။
လိင်မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများဆီသို့ တံခါးပေါက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုက်တွန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် သို့မဟုတ် ချောမွတ်နေသော ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို တိုက်ရိုက်ရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြသော ဆက်စပ်အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ချောမွတ်နေသော ကုန်းစောင်းမှ အောက်သို့လျှောချရန် ဤအရာသည် ကြားနေအကြောင်းအရာကို အသုံးပြုခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့အများအပြားအတွက် သတင်းမဟုတ်ပါ။
Cal Newport ရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ရတာ ထိုက်တန်ပါတယ်။ Digital Minimalism၎င်းတွင် လက်ကားဒစ်ဂျစ်တယ်အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး လက်တွေ့ကျသော ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များ ပါဝင်သည်။
PMO သည် အွန်လိုင်းဂေဟစနစ်အတွင်း တည်ရှိသည်၊ PMO ကို ဦးတည်သည့် ကွင်းဆက်ရှိ အပြစ်ကင်းသည်ဟု ထင်ရသော လင့်ခ်များကို ချိုးဖျက်ခြင်းသည် ၎င်းအပေါ် သင်၏ မှီခိုအားထားမှုကို အားနည်းသွားစေနိုင်သည်။ ထင်ရှားသော ဥပမာများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ကပ်လျက်ပါရှိသော လူမှုမီဒီယာဆိုက်များဖြစ်သည်။ Newport သည် သင့်အချိန်များကို အခြားပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ဖြည့်ရန် အရေးကြီးကြောင်း သူ၏စာအုပ်တွင် အကြံပြုထားသည် - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေပါသည်။ PMO သည် မင်းနေမင်းဖြစ်နေသေးသောကြောင့် အစပိုင်းတွင် ဤအရာသည် အလွန်ခက်ခဲသော်လည်း၊ ဤနေရာသည် စထရိရိုက်ခြင်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ PMO ၏ 'ဆွဲငင်အား' မှလွတ်မြောက်ရန် သင်သည် သင်အသုံးပြုသည့်နောက်ဆုံးနေ့နှင့် သင်အသုံးပြုသည့်ရက်ကြား တစ်ပတ်မှ ဆယ်ရက်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိပြီး အဲဒါတွေကို ကောင်းကောင်း မဆက်ဆံဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ လျော့နည်းသွားမှာကို သိခြင်းက သင့်ကို ပိုလုံခြုံတဲ့ ရာသီသွေးတွေဆီ ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည် PMO ၏ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း စည်းချက်ကျကျ ရပ်တည်နေချိန်တွင် ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် ရိုင်းစိုင်းသော တွန်းအားများဖြင့် သင့်သွားများကို အံကြိတ်ရန်သာ လိုအပ်ကြောင်း သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အက်ပ်တစ်ခုမှ အကူအညီရယူလိုပါက၊ စိုစွတ်စေသော ကြိုးစားရန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်က ပျော့ညံ့ပြီး မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့ ခံစားရတဲ့ မင်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွန်းအားတွေ မဟုတ်ဘူး။ သင်သည် သူတို့ကို PMO ဖြင့် ပြုစုပေးသောကြောင့်သာ ၎င်းတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် NoFap ကို လေ့ကျင့်ပြီး ရက် 30 တိုင်း တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်ပါက သင်၏ တိုက်တွန်းချက်သည် ထိုပုံစံအတိုင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ နေ့တိုင်းတိုက်တွန်းမှုမခံစားရမီ PMO မရှိသည့်နေ့ကို စိတ်ကူးမယဉ်မီတွင်၊ ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုမရှိဘဲ ရက်သတ္တပတ်များ ကုန်လွန်သွားသည်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ရက် 30 ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ယခင်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် PMO တွင်ပါဝင်ရန်ထက် ပိုမိုလေးလံပါသည်။